Obere Mepeepe Aluminium China Manufacturers & Suppliers & Factory
Obere Mepeepe Aluminium - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 21 Ngwaahịa maka Obere Mepeepe Aluminium)
Aluminium Alloy Fabric Elu Speed ​​Automatic Door
Nchịkọta Ọsọ Ọsọ nke PVC Kedu ihe mere ịchọrọ ibo ụzọ dị elu nke PVC maka azụmahịa gị? Ọnụ ụzọ dị elu nke PVC nwere ike imeghe / mechie karịa 1m / s ma nwee nnukwu ọrụ iji guzogide ike, n'agbanyeghị ebe ị wụnye ọnụ ụzọ gị, n'ime ma ọ bụ n'èzí, ịnwere ike inwe ahụmịhe dị ukwuu iji ya tụnyere atụnyere ọnụ...
Ngwongwo nke aluminium zoro ezo na-emepe okporo ụzọ ụlọ mposi
Ngwongwo nke aluminium zoro ezo na-emepe okporo ụzọ ụlọ mposi A na-akpọkwa ụzọ ngwa ngwa ọnụ ụzọ dịka aluminum alloy ngwa ngwa, na-ezo aka dị ka ndị na-ekpuchi windo. Ọ bụ ụdị ọhụrụ nke ọnụ ụzọ ngwa ngwa nke nwere mgbochi na ịchọta oke okpomọkụ. Ọ nwere ike ịtụkwasị obi, dị irè ma dị mfe ịrụ ọrụ. N'iji usoro zuru...
Onye na-achịkwa ya na Obere ụgbọala
Onye na-achịkwa ya na Obere
Ụlọ ọrụ nchebe dị elu nke aluminium
Ụlọ ọrụ nchebe dị elu nke aluminium The i ndustrial kwalite oghere n 'ime njem , nke a na-agụnye usoro ụzọ ụzọ , na- ebuli egwu. Site n'ichepụta ọdịdị dị mma, nke dị nro ma dị mfe, ọ na-enye anyị obi ụtọ. Ịrụ ọrụ nke nnukwu ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na-eme ka ndị mmadụ nwee mmetụta dị ike. Ọ nwere usoro mmiri na-esi...
Aluminium turbine ọsọ ọsọ na-emechi ụzọ
Alloy Alloy Mix Spiral High Speed ​​Door Njikọ Ọdịdị Aluminium Elu Ọnụ Ụzọ Dị Elu bụ ụdị ọhụrụ nke ọnụ ụzọ ngwa ngwa nke nwere mgbochi ohi na okpomọkụ dị elu. Ọ nwere ike ịtụkwasị obi, dị irè ma dị mfe ịrụ ọrụ. N'iji usoro zuru ezu, isi bụ DSP mgbawa, usoro ahụ na-esetịpụ oghere elu nke ọnụ ụzọ site na ịnweta...
Aluminium turbine akwa ọsọ ala ekpuchi ụzọ
Aluminium turbine akwa ọsọ ala ekpuchi ụzọ A na-akpọkwa ụzọ ngwa ngwa ọnụ ụzọ dịka aluminum alloy ngwa ngwa, na-ezo aka dị ka ndị na-ekpuchi windo. Ọ bụ ụdị ọhụrụ nke ọnụ ụzọ ngwa ngwa nke nwere mgbochi nsị na oke nke okpomọkụ. Ọ nwere ike ịtụkwasị obi, dị irè ma dị mfe ịrụ ọrụ. N'iji usoro zuru ezu, isi bụ DSP...
Onu Oke Ugbo Ogba Ogba O nwere ike iji ya -35 ℃ ma nyere aka ịchekwa ume, na-ebelata ikuku ikuku, ma belata mkpọtụ. O nwere ike idebe nri ahụ. Ọnụ ụzọ mgbochi mgbochi dị nro nwere nhazi ihe owuwu dị mfe, nke bara uru iji arụ ọrụ nke ọma, na-ebelata oge nke ịrụzi ma dochie akụkụ ndị dị mma, na-eme ka ọ dịkwuo ogologo...
Obere Ngwá Ọrụ Na-eme Ka Ọwa Gbasaa
Obere Ngwá Ọrụ Na-eme Ka Ọwa Gbasaa Ịgba ọsọ ọsọ, nchekwa na amart nwere ike ịhazi gị site na gị chọrọ.Obudata dị ike. n'otu ebe dị elu na-aga n'ihu, ọkụ nwere ike ịrụ ọrụ karịa 1000 ugboro
Oghere na-ekpuchi ọkụ ọkụ nke aluminium na 40mm
Nkọwa maka ọnụ ụzọ na-ebu ọsọ ngwa ngwa nke
Aluminium elu ọsọ turbo n'ọnụ ụzọ
Aluminium elu ọsọ turbo n'ọnụ ụzọ nhazi nke okpukpu abụọ nwere ike ịmepụta ọnụ ụzọ n'ime na nchebe okpomọkụ na-enweghị okpomọkụ, na nchebe okpomọkụ na-enweghị okpomọkụ ma na-enwe nghọta ziri ezi na eriri ọkụ ọkụ, n'ime ime na n'èzí bụ n'ụzọ doro anya na-ekpughe ọdịdị ọkwa...
Mpụga Ụlọ Nche Aluminium Ntanetị
Mpụga Ụlọ Nche Aluminium Ntanetị Isi atụmatụ: Hongfa Automatic door ụlọ ọrụ na-enye dị iche iche nke ọnụ ụzọ. Oghere nke nchekwa Aluminom na-ekpuchi ọnụ ụzọ bụ otu n'ime ụdị ahịa kachasị mma. Ọ bụghị nanị na imeghe na mmechi ngwa ngwa, ike dị mma, na-eguzogide ifufe, ma nwekwara ike imebi ohi, mara mma ma na-eme...
Obere Mepeepe Aluminium Oghere nke Aluminium Oghere Nchebe Aluminium Oghere Nchekwa Aluminium Oghere nke Aluminom Oghere Roller nke Aluminom Alumini Mpempe Aluminom Oghere nke Aluminom Vally